Ka shaqeynta joojinta cunsuriyada hal qoys markiiba | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Maajo 4 , 2021
Ilaa xagaagii hore, Marie iyo Matt Sprader runti kama aysan fikirin cunsuriyadda. Maaddaama aan nahay laba qof oo caddaan ah, oo carruurtooda yar yar ku barbaarinaya bulshada ugu badan ee caddaanka ah ee Stillwater, weligood weligood lama kulmin takoorid ama xitaa kama aysan hadlin midabtakoor nidaamsan. Laakiin markaa George Floyd waxaa lagu dilay beel u dhow si lama filaan ah fahamkooda adduunka ku xeeran wuxuu bilaabay inuu is beddelo.
"Dhacdooyinkii xagaagii la soo dhaafay runtii waxay si cad ugu muujiyeen aniga iyo ninkeygaba in aanaan aqoon ugu filneyn cunsuriyada aqoonteena," ayay tiri Marie Sprader, "sidoo kale ma aanan ogeyn sida loola hadlo caruurteena iyo sida loo koriyo. inay noqdaan nooca aadanaha ee aan rajeynayno inay noqdaan. Haddii aynaan wax iska barin oo aynaan wax ka qaban [cunsuriyadda nidaamsan] waxba isma beddelayo dadkuna way sii dhimanayaan. ”
Markaa markii Barnaamijka Waxbarashada Qoyska ee Carruurnimada Hore ee Dugsiyada Dadweynaha Still Area Aagga ay bixiyaan fasalo taxane ah oo ku saabsan Waalidnimada Caddaaladda Jinsiyadda, Spaders-ka ayaa ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee is qoray.
"Fasallada ayaa na dhiirrigeliyey oo noo qalabeeyey inaan kala hadalno wiilkeenna arrintaas," ayay tiri Marie. “Marnaba goor hore ma ahan in wadahadalkan lala yeesho carruurta. Dhacdooyinkan ayaa sii soconaya waana wax laga naxo oo laga murugoodo. Sababtu waa sababta ugu badan ee looga hadlayo oo kor loogu qaado wacyiga oo looga caawiyo inuu fahmo wuxuu sameyn karo si looga hortago cunsuriyadda
Spraders waxay ka mid yihiin in kabadan 60 qof oo kaqeyb qaatay koorsooyinka cadaaladda jinsiyadaha sanadkan. Fasallada waxaa casharro ka bixiya shaqaalaha degmada dugsiga iyo marti qaas ah, waxaana loogu talagalay in lagu caawiyo ka-qaybgalayaasha inay fahmaan taariikhda midab-kala sooca Ameerika oo ay bartaan inay la noqdaan xulafo iyo isbadal-sameeyayaal ka dhex jira beeshooda. Qeybta 1aad ee taxanaha waxay tilmaamaysaa cunsuriyadda nidaamsan ee ka jirtay dalkan tan iyo aasaaskeedii waxayna ka caawineysaa kaqeybgalayaasha inay aqoonsadaan eex ka jirta nolol maalmeedkooda. Qaybta 2 waxay diiradda saareysaa waxa qoysaska ku samayn karaan guryahooda si ay uga caawiyaan carruurta inay koraan iyadoon loo eexan xumaanta. Qeyb cusub oo 3 ah ayaa lagu dari doonaa xagaagan, taas oo u oggolaan doonta ka qaybgalayaasha inay kaqeybqaataan daraasad buugeed si ay xitaa u sii qotomaan mowduucyada lagu soo qaatay fasallada ugu horreeya.
Fasallada waxay u furan yihiin dhammaan dadka degmada deggan, haddii carruurtoodu dhigtaan Dugsiyada Dadweynaha ee Deegaanka 'Stillwater' iyo haddii kale. In kasta oo asal ahaan loogu talagalay waalidiinta iyo daryeelayaasha carruurta yaryar, nuxurku wuxuu khuseeyaa carruurta dugsiga hoose iyo kuwa dhexe sidoo kale.
"Aqoonta aan soo baranay waa wax aan la aamini karin," ayuu yiri Matt Sprader. “Adiguna waxaad ku dhex jirtaa dad kale oo aad isku doon wada tihiin, oo doonaya inaad isbedelka samaysaan. Waa caadi in la dareemo raaxo la'aan waxayna madaxdu noo sheegeen inaan dareemno raaxo la'aan. Ma jiro buug lagu ciyaaro. Waxa ugu weyni waa inaad ka sii hadasho cunsuriyadda oo aad ku dabaqdo wixii aad soo baratay adiga iyo reerkaagaba. ”
Koorsooyinka ayaa dhowaan soo jiitay dareenka Ururka Bulshada ee 'Water Water Area Foundation', oo u xushay barnaamijka inuu noqdo qofkii ugu horreeyay ee hela Jinsiga iyo Caddaaladda Bulshada. Iyada oo la kordhinayo $ 15,000 oo maaliyad ah, taxanaha ayaa loo diyaarin doonaa xitaa qoysas badan sanadka soo socda. Deeqda ayaa lagu maalgelin doonaa iibsashada buugaagta loogu talagalay daraasaddaha buugaagta, iyo sidoo kale in la ballaariyo gaadhista gaar ahaan qoysaska carruurta yar yar iyada oo la siinayo nooc kooban oo ka mid ah taxanaha Waalidka ee Caddaaladda Jinsiga ee kooxaha waalidiinta ee dugsiga hoose iyo dhexe. Intaa waxaa sii dheer, deeqda ayaa gacan ka geysan doonta in koorsada ay u sahlanaato qoysaska iyadoo la dhimayo kharashka, isla markaana la siinayo diiwaangelin bilaash ah kuwa aan awoodin inay bixiyaan.
“Waalidiinta badankood waxay rabaan inay barbaariyaan carruurta daryeela oo naxariista leh,” ayay tiri Jenny Hanlon, oo ah barbaariye waalid oo gacan ka gaysatay qaabeynta iyo barashada koorsada isla markaana gudbisay codsiga deeqda xilliga qaboobaha “Si taas loo sameeyo, waa inaan ka caawinno inay daryeelaan oo u naxariistaan qof walba - maaha kaliya inay u dulqaataan qof walba. Waxaan dooneynaa inay si dhab ah ugu dabbaaldegaan dhammaan qaababka aan ku kala duwan nahay iyo sida ay kuwani u yihiin waxyaabo la yaab leh. ”
Ma xiiseyneysaa inaad waxbadan barato?
Raadi sharraxaadda koorsada iyo macluumaadka diiwaangelinta ee Waalidka loogu talagalay Caddaaladda Jinsiga khadka tooska ah . Qeybta 1 ee taxanaha waxaa hadda loo heli karaa koorso asynchronous ah oo aad ku qaadan kartid xawaarahaaga, oo waxaa laguugu soo bandhigi doonaa si toos ah dayrta.